As of Sat, 04 Jul, 2020 06:20
बिहिवार, फाल्गुन १६, २०७५
बैंकिङ पहुँच नभएका मानिस हाम्रा ग्राहक हुन्
१० करोड अधिकृत र ७ करोड जारी पुँजी रहेको साधना लघुवित्त संस्थाको चुक्तापुँजी ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । एनसीसी बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकसहित ६७ जना व्यक्ति संस्थापक रहेका यस संस्थाले गोरखा, धादिङ, तनहुँ लमजुङ, कास्की पर्वत बाग्लुङ, मकवानपुर, म्याग्दी र मनाङ गरी १० जिल्लामा कार्य गरिरहेको छ । गत वर्ष कात्तिकबाट सञ्चालन आएको यस संस्थाले गोरखा, धादिङ, तनहँु, कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, पर्वत र बाग्लुङ जिल्लामा २६ वटा शाखा स्थापना गरेको छ भने हालसम्म करिब २०, हजार सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी १० हजार ४ सय ३५ सदस्यबाट ७० करोड ६ लाख लगानी गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा यस संस्थाका गतिविधिका बारेमा सीईआ रेशम न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी ः
नेपालमा प्रविधिको उच्च सम्भावना छ
अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी ओ-याकल पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश देशमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भएको छ । क्यालिफोर्नियामा मुख्य कार्यालय रहेको यस कम्पनीले सुरुवाती दिनमा डाटावेस सफ्टवेयर एन्ड टेक्नोलोजी, क्याउड इन्जिनियरीङ सिस्टम, इन्टरप्राइज सफ्टवेयर सिस्टममा काम गरी सन् २०१८ मा आफ्नै ब्रान्डबाट डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ल्याएको छ ।
बुधवार, फाल्गुन १५, २०७५
कार्बन व्यापारमा जाँदैमा मुलुकलाई घाटा हुँदैन
विश्वमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा निकै चर्चामा छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मानव तथा पृथ्वीको अस्तित्व नै कालान्तरसम्म रहँदैन भन्दै वातावरणविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । औद्योगिक विकास गर्ने धनी राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तन गराउनुमा धेरै भूमिका रहेको तर यसको असर नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकले भोग्दै आएका छन् । वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न वनविनाश र हैसियत बिग्रिएको वनको अभिवृद्धि, कार्बन उत्सर्जन कटौती, वन कार्बनको सञ्चिति अभिवृद्धि गर्न चाहने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई औद्योगिक राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति एवं पुरस्कारस्वरूप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखियो । यही मान्यताका आधारमा वनजंगलले सञ्चित गर्दै कार्बन व्यापारका कार्यक्रमहरू लागू हुन थाल्यो ।
मंगलबार, फाल्गुन १४, २०७५
निगमको नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्छौं
२०४७ सालमा साढे १८ वर्षको उमेरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट नायब सुब्बाको जागिर सुरु गरेका सुरेन्द्रकुमार पौडेल हाल नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक छन् । साढे तीन वर्ष विभागमा बिताएर २०५० सालमा चार्टर एकाउन्टेन्ट अध्ययन गर्न भारत गएका उनी त्यसपछि लेखा व्यवसायमा आबद्ध भए । सन् २००१ देखि २००६ सम्म तिलगंगा आँखा अस्पतालमा र सन् २००७ देखि २०१५ सम्म स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा काम गरेका उनी सन् २०१५ सालदेखि उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक बने । बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उदयपुर सिमेन्टको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले छोटो समयमा सिमेन्टलाई नाफामा पु-याउन सफल भए ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको आलोचना
पछिल्लो समयमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गरेपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ब्याजदरमा समेत हस्तक्षेप गरेको छ । कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटाउने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको भए पनि समीक्षामार्फत गणना गर्ने विधिमा समेत परिमार्जन गरिएको छ । कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर वाणिज्य बैंकहरूले २०७५ चैत मसान्तपछि ४.७५ प्रतिशत तथा २०७६ असार मसान्तपछि ४.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई खेलौना सम्झिए
अछामको घुघुरकोटमा जन्मिएका नृप वड कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हुन् । वड नेतृत्वको धनगढी नगर भर्खरै नगर विकास कोषको सूचकका आधारमा यस वर्ष २ सय ९३ नगरमध्ये अब्बल ठहरिएको छ । खेलकुद र राजनीतिमा रुचि राख्ने उनी २०३७ सालबाट धनगढीमा बस्दै आएका हुन् । व्यवस्थापनमा स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेका उनी राजनीतिमा लागेपछि अध्ययन टुटेको बताउँछन् । उनी स्थानीय तह नागरिकको नजिकको सरकार रहेको र स्थानीय सरकारले नै तिनका दैनन्दिन समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
फारिस हदाद जर्वोस विश्व बैंकका लागि नेपालका देशीय प्रबन्धक हुन् । नेपालका लागि मुख्य विकास साझेदारका रूपमा रहेको विश्व बैंकले नेपालको नीतिगत क्षेत्रदेखि विभिन्न परियोजनामा सहायता गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विश्व बैंकको विकास सहायता बढ्दै गएको छ । यस्तै, विश्व बैंक नेपालसँगको सहकार्यको ५० औं वर्षिकोत्सव मनाउने क्रममा पनि छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो डुईङ बिजनेस रिपोर्टले नेपालको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाएकोमा सरकारले त्यसलाई सच्याउन आग्रह पनि गरेको थियो ।
मुलुकको समसामयिक अर्थ–राजनीतिका विषयमा निर्भिकतापूर्वक टिप्पणी गर्ने युवा अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारी लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा प्राध्यापन गरिरहेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूको संस्था इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) मा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत डा. अधिकारीले अमेरिकाबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि तथा नर्वेबाट प्राकृतिक स्रोत तथा विकास अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
फेसबुक, ट्विटर र चियागफमा पनि नागरिकले चिन्ता गर्ने महत्वपूर्ण विषय भनेको बढ्दो विषादीको प्रयोगको विषय पनि हो । हुन त राष्ट्रिय महŒवका विषयभन्दा पनि भाँती–भाँती विषयमा समय र इनर्जी खर्चिने चलन नेपालीह«को आमविशेषता नै बनेको छ । तर पनि पछिल्ला दिनहरूमा विषादीरहित उत्पादनको महत्वका बारेमा पनि चर्चा उत्तिकै हुने गरको पाइन्छ । समाजले विषादीको प्रयोगले दीर्घरोग लाग्ने विषयमा सचेतनाको स्तर बढाएको पाइन्छ ।
जीबन बिमा व्यवसायमा थप एक कम्पनीले कारोबार सुरु गरेपछि नेपालमा जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १९ पुगेको छ । कम्पनीहरू थपिएसँगै बिमाको पहुँच त वृद्धि भएको छ, तर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत सुरु भएको छ । कम्पनीहरूबीच कर्मचारी तथा अभिकर्ता तानातानको अवस्था भए पनि समितिले विभिन्न निर्देशन दिएको छ । पुराना कम्पनीमा सामान्य तहमा काम गरेका कर्मचारी तथा अभिकर्तालाई नयाँ कम्पनीहरूले उच्च तह र सुविधा दिन थालेपछि पुराना कम्पनीहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । समितिले हालै मात्र अभिकर्तालाई विदेश भ्रमण गराउँदा, गाडीको सुविधा दिँदा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन्, वीरबहादुर बलायर । कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा चर्चित हुँदै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका बलायर डोटी जिल्लाबाट सांसद समेत निर्वाचित भइसकेका छन् । प्रस्ट विचार र जुझारु स्वभावका बलायर पार्टी कार्यकर्ताबीच लोकप्रिय नेता मानिन्छन् ।
अमेरिकाको फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालयबाट ‘नेपाली नगरपालिका : मेयरहरूका समस्या’ शीर्षकमा पीएचडी शोध गरेका धवलशमशेर राणा नेपालगन्ज उपमहानगरपालकाका पिता हुन् । उनी गत वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालगन्ज नगरको प्रमुखका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका हुन् ।
नेपालमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्र अन्यको तुलनामा निकै छिटो अघि बढेको छ । सूचना प्रवधिको विकासले फड्को मार्नुमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै देन छ । सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा हेर्दा सूचना प्रविधि क्षेत्र अगाडि आउने गर्छ ।
सबैभन्दा कान्छो पहाड श्रृङ्खलाका रूपमा परिचित चुरे पहाडको भौगोलिक अवस्थाको भू–बनावट निकै कमजोर छ । पछिल्लो समय चुरे दोहनका कारण त्यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक, सामाजिक, भौगालिक, प्राकृतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयमा सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्न थालेका छन् । लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ ।